MA SUURTOGAL IN DIGAAGDOON IYO BARIIS: SIDA LOO SIIYO SIIRIYAALKA SHIMBIRTA IYO WAXA FAA'IIDO - BEERAHA DIGAAGA
Miyaan quudin karayaa digaaga iyo bariiska
Qaar badan oo ka mid ah beeralayda cusub ayaa is weydiiya su'aal muhiim ah: miyuu suurtogal ah in lagu quudiyo digaag leh ari, haddii ay sidaas tahay, sida saxda ah loo sameeyo.
Iyo sabab wanaagsan, sababtoo ah firileyda way ka duwan tahay midhaha caadiga ah waxayna waxyeeleyn kartaa nidaamka dheef-shiidka, haddii aad shimbiraha ku darsato adoon aqoon u lahayn.
Bacaha iyo bariiska raashinka digaaga
Waxay ku haboon tahay beeralayda inay isticmaalaan caruurnimadan, sababtoo ah way jaban yihiin oo marwalba waxaa ku yaal guri kasta. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo jajabkii ugu horreeyay ee la isku qurxiyo iyo bariisku ay yihiin kuwo hadhuudh ah, ra'yigani maaha mid run ah. Hadhuudh cad. Dhaqankan waxaa ku jira xaddi badan oo istaarijin ah, oo si xun u saameeya labadaba dheef-shiidka iyo nidaamka dareenka ee digaaga. Laakiin waxaad si cad u quudin kartaa shimbirta bariiska, waxa ugu muhiimsan waa in la sameeyo si dhexdhexaad ah.
Ma taqaanaa? Cunto khibrad leh ayaa ogaaday in hadhuudh cadcad ay tahay quudinta ugu wanaagsan ee digaagga.
Bacaha Dalaggu waa ili ah borotiinka qudaarta ah waana mid aad u faa'iido leh. Laakiin qaabkeeda qoyan ee aan la cuni karin. Xaqiiqdu waxay tahay, in aad gasho caloosha, buckwheat isla markiiba barar, taas oo abuuraysa dhibaatooyin badan leh nidaamka dheefshiidka.
Joogista cuntooyinka la kariyey ee la kariyey iyo bariiska waa dammaanad ah difaac wanaagsan, maaddaama ay alaabadani ku sumoobayaan jirka digaag leh calcium, magnesium, birta, zinc iyo walxo kale oo muhiim ah.
Baro sida cunnada digaagga ay tahay inay noqoto, waxa la quudiyo iyo sida loo diyaariyo quudinta loogu talagalay digaagga, sida loo cuno digaagga xilliga jiilaalka ee wax soo saarka ukunta.
Sidee loo siiyaa digaagga badarka
Sida aan hore u fahmay, waxaa suurtagal ah in la cuno hadhuudh cad iyo shinbir shimbireed, si kastaba ha ahaatee daryeel gaar ah. Ugu horreyntii, waa in aan xasuusanno xeerka guud ee ugu muhiimsan: in la siiyo digaagga iyo karbaba, bariiska waa in la kariyaa. Cagaarka caanuhu wuxuu noqon karaa mid aad u dhib badan shimbirta. Waxaa jira sifooyin iyo xeerar kale oo ay tahay in si adag loo raaco.
Dadka qaangaarka ah, sida dhoobada digaagga, iyo xubnaha kale ee shimbir shimbir ah, waxaa lagu talinayaa in la kariyo hadhuudhkii oo keliya hal mar maalintii (ugu fiican dhammaan waqtiga qadada). Isla mar ahaantaana, boorashka waa in lagu daraa cuntooyinka kale, marka loo eego: 1 qayb oo ka mid ah booroofka noocan ah ilaa 3 qaybood oo cunto kale ah. Chicks ayaa aad u jeclaan lahaa bariiska, gaar ahaan foomka Boorashka lagu qasi karo caanaha. Boorashka noocan oo kale ah wuxuu si fiican u quudiyaa jirka wuxuuna ku kordhiyaa fitamiinada iyo macdanta lagama maarmaanka ah.
Waa muhiim! Bariiska dheeraadka ah ee cuntada ayaa keeni kara curyaanimo ama xitaa dhimasho dadweynaha digaaga oo dhan.
Wixii diyaarinta cuntada dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh, waxaad isticmaali kartaa ma aha keliya bariiska aan la saarin, laakiin sidoo kale chaff, iyo bariis bari, kuwaas oo sidoo kale lagu daraa isku darka isku qasan.
Aagga la karkariyey waxaa lagu dari karaa cuntada oo ah digaagga iyo digaagga labadaba. Ma jiro xadeyn da 'yar oo lagu cuno siyabadan.
Wakhtiga cunidda cunnooyinka bakeeriga ah waa isku mid sida bariiska - qadada. Waxaana lagama maarmaan ah in laysku daro Boorash oo isku mid ah: 1 qaybood oo boorash ah ayaa lagu qasan yahay 3 qaybood oo cunto kale ah.
Bacaha waxaa ku jira tiro badan oo ah makro-yar iyo nafaqeeyayaal yar yar oo jidhku u baahan yahay: kalsiyum, zinc, magnesium iyo kuwo kale oo badan. Sidoo kale boorashka xayawaanka ayaa leh fitamiin B iyo E.
Ogow haddii aad siin kartid baradho, baradho, digir, kalluun, toon.
Hilibka Hilibka Qashinka ah
Waxaa la rumaysan yahay in bariiska iyo buckwheat ay leeyihiin inta ugu badan ee nafaqooyinka, laakiin ma aha. Waxaa jira dalagyo badan oo raqiis ah oo waxtar badan leh:
yachka (xabbad jilicsan oo la jarjaray);
Tani, si kastaba ha ahaatee, macnaheedu maahan in dhammaan cuntooyinka oo idil ay ka koobnaan karaan cuntadaas.
Waa muhiim! Si aad u quudiso digaagga kali ahaan siriyaal waa gabi ahaanba aan macquul ahayn.
Fiican: waqtiga qadada, ku dar boorash yar oo khudaarta cagaaran, geedo yaryar ama cunto kale oo aasaasi ah.
Sidaa darteed, si aad u quudiso digaaga digaag iyo bariis si cad ayaa suurtagal ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la raaco laba qawaani oo fudud: dalaggu wuxuu ku habboon yahay raashinka kaliya ee la kariyey, iyo in badan oo ka mid ah quudinta noocaas ah waxay si xun u waxyeeleyn kartaa shimbirta caafimaadka.